Halyey ku guuleystay bilado dahab ah oo hadda ah xamaali qaada shamiintada… – Hagaag.com
Halyey ku guuleystay bilado dahab ah oo hadda ah xamaali qaada shamiintada…
Posted on 5 Janaayo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Markii ay ku heeseen taageerayaasha Raja Casablanca ee Morocco “dalkeygow wey i dulmiyeen” waxay direysay fariin ku socota xukuumada Morocco si ay uga hor tagto xaaladaha ka sii daraya ee dhaqaale iyo bulsho oo heysata dhallinyarada, mala ogeyn in heestani ay sidoo kale khuseyneyso halyeeyo heer caalami ah oo ka dhigay wacdaro tartamada caalamiga ah, korna u qaaday calanka dalkooda iyo magaciisa.
Mid ka mid ah magacyada la xanuunsan faquuq iyo dayac ayaa ah orodyahanka caalamiga ah Abdul Rahim bin Radwan, oo noloshiisa isu bedeshay in uu orodka miidaaliyad dahab ku guuleysto oo loo tumay astaanta wadankiisa goobaha tartamada orodada iyo hadda oo ah xamaali shameento, wuxuu ka shaqeeyaa dhismaha si uu u soo dhacsado quutul yoomiga asaga iyo caruurtiisa.
Baraha bulshada oo lagu faafiyey sawirada halyeygan oo ku guuleystay abaalmarino bilado iyo koobab tartamada orodada ee ka dhacay Mareykanka, Brazil, Chile, France, Italy iyo dalal kale oo badan. Dad badan oo ka fal celiyey ayaa ku tilmaamay nasiib daro xaalada Radwan, taasi oo keentay in warbaahinta maxaliga ah ku tartamaan toosh ku ifinta xaaladiisa, waxay ugu tageen wareysyo si sheekadiisa u gaarto mas’uuliyiinta dowlada.
Mar kasta oo bin Radwan marti uu ku yahay barnaamij oo looga hadlayo dhibaatada heysata, waxay dadka ay soo hordhigaan ama ku xasuusiyaan sawiro uu kula jiro boqorkii hore ee dalkaasi King Hassan 11 oo si weyn u soo dhoweeyey kadib markii guulo ka soo hoyey tartan orod oo caalami ahaa.
Kumanaan dadka reer Morocco ayaa bilaabay olole lagu caawinayo ben Radwan, lagana saarayo faqriga ragaadiyey asaga iyo reerkiisa, halka qaar kalena fursadan lama filaanka ah ku muujiyeen murugo aad u weyn xaalada halyeygooda.